RW mvrìng kèní vpǿng vto nge...!
RW kàru vrulám
Nàò Email NàRu ò..!
VHØ SHÌLÁM (1)
Rvwang Chømyo vnvp mela
Vpø Vtvng ringvtvng we nøng maq rvwang dvciceri vmo...!
Traditional dress of rawang DvngSvl
Traditional dress of rawang ( Dvru )
Rvwang ( mvtwang )Vcxng
Nxng maq mvnga Háng ie
Pvngnvm rvmá yadx i ri wa yvng sha
Rvwang Mong ShiGung
ShiGungce i kwango we nxng maq mong rvzi
vnvp vtvng we tvwvn shi gungce ri gx yvng lam wa ie..!
Rvwang mece o yiHongDvngKa
Dari vme vsi maq i nx yadx YiHu Hu o nx belaq dekwa yvng sha ..
9:58 PM Rvwang MvRing..! No comments
Tiqmaq nx vyvng shaq dei nxng ni, I ni gx ne dvju deshar shi nxnge..;P
Myitkyina TIWIN mvring HEBRON AG Shvngømré ( 50 ) Nøng ShélòngTøng
9:32 PM Rvwang MvRing..! No comments
8:03 PM Rvwang MvRing..! 1 comment
Posted in: DíHANG
7:16 PM Rvwang MvRing..! No comments
Vng ní svma2gǿ kàshø;ne wa...
vngChø̀mpè shø̀nkà -- Ngànø̀nt yol relé...
VngChø̀mè -- Kàpà rvt nø̀nt èyol relè...?
vngChø̀mpè shø̀nkà -- Tiqkvtkvt ngà nø kapà dvng taq gø zǿm mvdv̀ng dø lv́n shø̀nge.
VngChø̀mè -- Nà wedø dvdam shìmvrà ó..!
vngChø̀mpè shø̀nkà -- pàwálám rvt lèó..
VngChø̀mè -- Vsv̀ng rì í nø nàsv̀ng kapv̀n dvng taq gø zǿ:mèdv̀ng we vsháshaq í rvt lèó..!
Posted in: VHØ SHÌLÁM
4:51 AM Rvwang MvRing..! No comments
Rvwang Chømyo menice svlám shì we yvng lám wàì....
12:33 AM Rvwang MvRing..! No comments
Myitkyina TiWin mvring AG hebron shxngxmré i wà o we 50 nøng shélóngtøng kvt Poí ...
Rvwang Gosple Song
8:06 AM Rvwang MvRing..! No comments
Rvwàng Gvray ShaShø̀ng ni..... DownLoad èlushì
1.Download ClickHere 2. Download ClickHere3Download ClickHere
4Download ClickHere 5. Download ClickHere 6.Download ClickHere
7.Downlad ClickHere 8.Download Click Here 9.Download ClickHere
10.DownloadClickHere 11DownLoadClickHere 12DownloadClickHere
6:56 PM Rvwang MvRing..! No comments
Fool again .WESTLIFE.mp3 - If I let you go WESTLIFE.mp3 - No matter what WESTLIFE.mp3 - Flying without wing WESTLIFE..mp3 - I haveadream WESTLIFE.mp3 - Sware it again WESTLIFE.mp3 - I lay my like on you WESTLIFE.mp3 - Season in the sun.mp3 WESTLIFE - Big big world.mp3 - Nothings gonna change my love for you.mp3 - Truely , madly and deeply.mp3 - Right here waiting.mp3 - Unbreak my heart.mp3 - The power of love.mp3
6:48 PM Rvwang MvRing..! No comments
ချစ်သူ့အနား-(Rဇာနည်, အဲလတ်စ်, Bunny Phyo, ဖြိုးကြီး, ချမ်းချမ်း, ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း, အိမ့်ချစ်)
ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ - အိမ့်ချစ်
ကန္တာရနှင်းဆီ - D ဖြိုး ( mp3 )
SIR ROCK HOUSE (BigBag, Wanted, Reason , Idiots )MP3
13.ချစ်တယ်ဟုတ်။14.နှစ်ပတ်လည်။15.ဟိုအရင်လို။16.Stay With Me။17.ယုံကြည်ပေးပါ။18.မင်းအနားမှာ။
ကမ္ဘာငယ်လေး - 9-0ne ဒေါင်းရန်
ပုံရိပ်ဟောင်း - မီးမီးခဲ ဒေါင်းရန်
အဝေးကပဲချစ်နေမယ် - Doreme ဒေါင်းရန်
အနိုင်မယူသူအရှုံး - မာရဇ္ဇ ဒေါင်းရန်
အိမ်ကိုလွမ်းတယ် - ပူစူး ဒေါင်းရန်
သို့...ထာဝရ - ဆူဇီ ဒေါင်းရန်
တစ်ရက်တော့ငိုပါ - ဆောင်းဦးလှိုင်+မို့မို့ ဒေါင်းရန်
အချစ်ကြီးသူ - ဒေါင်းလွဏ်း ဒေါင်းရန်
တိုးတိုးလေးပြောပါ - ဖိုးကာ ဒေါင်းရန်
မင်္ဂလာရှိသောနေ့သစ်ဆီသို့ - ပိုးအိစံ ဒေါင်းရန်
R ဇာနည် & စည်သူလွင် ဘယ်သူမ နားလည်ပါ Big bag.mp3 မင်းအကြောင်းအိမ်မက် L လွန်းဝါ+စည်သူလွင်.mp3 အတူတူဆိုရင် ထွဏ်းထွဏ်း+လေးလေးဝါး.mp3 - တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာ အဖွဲ့ .mp3 - ထာဝရဖြစ်စေ Lဆိုင်းဇီနှင့် အဖွဲ့.mp3 - ရတုအဆက်ဆက် ဆူဇီ.mp3 - စိတ်ညစ်မှာဆိုး L လွန်းဝါ+ဆူဇီ .mp3 -My love.mp3
ဆန့်ကျင်ဘက် မျိုးကြီး .mp3 - နေရောင်အောက်က မျိုးကြီး .mp3 - ပြေးလို့ကြိုပါ မျိုးကြီး .mp3 - နေခဲ့တော့ မျိုးကြီး .mp3 - နေ့သစ်တွေရှိမယ် မျိုးကြီး .mp3 - မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် မျိုးကြီး .mp3 - မလာပါနဲ့ မျိုးကြီး .MP3 - ပြောမရဘူး မျိုးကြီး.mp3 - လေပြေ မျိုးကြီး .mp3 - ကတ္တီပါလမ်းခွဲ မျိုးကြီး .MP3 - အပြစ်တစ်ခုဖန်ဆင်း မျိုးကြီး.mp3 - ပြန်လာချိန်လေး မျိုးကြီး.MP3
ရဲလေးနောက်ဆုံးထွက် တတိယ ကာရံ
.မနှုတ်ဆင်ချင်ဘူးRemix.mp3 - .တစ်ယောက်တစ်မျိုး.mp3 - .နတ်သမီး.mp3 - .မင်းနဲ့ပျော်ချင်လို့.mp3 - .ရိုးမြေည.mp3 - .မဟုတ်ရပါဘူး.mp3 - .ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို.mp3 - . မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး.mp3 -5ဝမ်းတူးဝမ်းတူး.mp3 - .တို့နှစ်ယောက်အကြောင်း.mp3 - ဘာစားမလဲအကို.mp3 - .ကိုယ့်ရဲ့ကွက်လပ်.mp3 - .ငါဘာမှမသိ.mp3
ယနေ့အတွက်ကိုမျိုး၏ အထူးလက်ဆောင်သီချင်း . MP3- I M B နေချင်တယ်မင်းအနား .mp3 - I M B သနပ်ခါး .mp3 - I M B မျက်နှာ .mp3 - သိမ်းထားခွင့် N ကိုင်ရာ .mp3 - . အရင်ကဇတ်လမ်း ဟန်ထွန်း .mp3 - ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းချင်း ဟန်ထွန်း.MP3 - အပြစ်မမြင်ပါဘူး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း.mp3 - မျောလွင့်နေတဲ့တိမ် ကောင်းမြတ်လေး .mp3 - လင်းနစ် ဒီဇင်ဘာည .mp3 - လမ်းဆုံ ဇော်ပိုင် .mp3 - L ဆိုင်းဇီ သွားစို့ အဝေး.mp3 - L ဆိုင်းဇီ မလွမ်းရဲသေးဘူး .mp3 - L ဆိုင်းဇီ ဟိုတုန်းကလို .mp3 - L ဆိုင်းဇီ အချစ်အတွက်ကံမကောင်ခဲ့သူ .mp3 - L ဆိုင်းဇီ မပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ငါ့ရင်ထဲ .mp3 - မိန်းကလေးအချစ် .mp3 - မိန်းကလေးအချစ် .mp3 - ခင်ဘုဏ်း မင်းအချစ်သာစစ်ပါစေ .mp3 -လိပ်စာပေးပါ အိုဇုန်းအဖွဲ့ .mp3 - ဝေးဦးမှာလား အာဇာနည်+L ဆိုင်းဇီ .mp3 - နတ်သမီးလေး ဂရေဟမ် .mp3 - ပြန်လိုချင်တယ် L လွန်းဝါ.mp3 - အချစ်နဲ့ဘဝ - အယ်လ်နောင်း.mp3 - အင်းယားသို့ .mp3 - အဖြူရောင်သံစဉ်.mp3 - နေချင်တယ်မင်းအနား.mp3 - ခင်ဘုဏ်း မိုးပြေး .mp3 - ကာရံမလှတဲ့အတွေး Remix သူသူ .mp3 - ဘဝရဲ့တံခါး Remix ချစ်ကောင်း.mp3 -ဖြူဖြူကျော်သိန်း အနီးဆုံးလားအဝေဆုံးလား အင်္ဂလိပ်.mp3 - Numa numa Remix အင်္ဂလိပ်.mp3 - Titanic remix အဂ်လိပ်.mp3 - Home again အင်္ဂလိပ်သီချင်း .mp3 - ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ဇတ်ဝင်သီချင်း .mp3 - လွမ်းမပြေ ဇတ်ဝင်သီချင်း .mp3 - ချစ်စံအိမ် ဇတ်ဝင်သီချင်း MP3
09 ထွက် သီချင်းများမှ အကောင်းဆုံးသီချင်းများ
D ဖြိုး ဒီကောင်မလေးအတွက်.mp3 - D ဖြိုး အိပ်မက်နိဂုံး .mp3 - D ဖြိုး နှမျှောတယ်.mp3 - ဆည်းဆာအလှခွေသစ်မှ ဇော်ပိုင်၏ သီချင်း ပြည့်စုံလွန်း.mp3 - ဆည်းဆာအလှ ခွေသစ်မှ ချမ်းချမ်းသီဆိုထားသော " ညှို့နိုင်လွန်းတဲ့ ကျမချစ်သူ.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ရှုပ်ထွေးခြင်း.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ မင်းသမီး.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ လမ်းမခွဲကြေး .mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ လေပြေ.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ရပ်.mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ အပြုံးလေး .mp3 - ဧသင်ချိုဆွေ ပြိုလဲကြေကွဲ .mp3
10:28 PM Rvwang MvRing..! No comments
အခုတလော ဒီနတ်လင့် Link က အ၇မ်းခေတ်စားနေပါတယ် မသိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရေးလိုက်တာပါ
http://www.dinkypage.com/112196/ ဒီလင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က ပို.လာရင် လုံးဝ click မလုပ်ပါနဲ. တကယ်လို.လုပ်မိရင်လည်း။ ကိုယ်က စက်ထဲမှာ software ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုအရေးကြီးတာတွေ လုပ်နေတုန်းမှာ click မိပြီဆိုရင်
အဲဒီ ပိတ်မယ့်နေရားလေကို ပြေးလိုက်နေရင်ကိုယ်သာမောသွားမယ် ဒီလိုလုပ် တစ်နေရာမှာပဲ စောင့်နေလိုက် X အမှတ်သားလေး ကို ပိတ်လိုက် ပြီးရင် Box wစ်ခုကျလာမယ် ok ကိုပြီးတဲ့ထိပါ ဆက် တိုက်နှိပ် ok သွားလိမ့်မယ် အဲဒါ ပါပဲ ။
Posted in: shashirari
Flash Songs Wàlám rvt
10:02 PM Rvwang MvRing..! No comments
YaLòng nø rvtø vlu:nò nø lvgun daqdvgvp svling shì lám Zaywa cèrì svng Flash song kadøwàlám walong svng Myinlega i vru shaq ie. Nønt èlum or ၀ါသနာ nàbá nì nø yazvng taq ø gø yvng shì / cvnshì lun shì wakà..;)
Flash song ebook
Yazvng nø Flash song walam Softwarecerì íe. Deyaq nø vsancèwa zvng shi e..;)
bellcom.swi blur.swi Bubble1.swi butterfly1.swi ChristmasGlass.swi fdeinfadeout.swi FishExample1.swi flowercomnet.swi heartflycompo.swi mousebutterfly.swi mouseeffectheart.swi mouseeffstarradomcolor.swimouseletter.swi
roseakhatcom.swi roseasicom.swi coin.swi
SwishMax.exe yazvngie version 2
yalong mvdøng mvkun wa long lam ie iwe version2long wa shi ni ie mepvng version3version4long ni nx zvngdak ngoe. shvngbe svng pmr
အော်ကမှာ version3ကိုလည်း ထည့်ပေးထားတယ် lvngpvng yvng taq ø ( version3 ) gø
9:55 PM Rvwang MvRing..! No comments
Nvmlvt Taq Nàce ráì rvt Pàmvrà wang vtonge..!
yayvng ta shilam rvt nø AUTO jøngwe shaq svng nvllam nø Rigthclick
wàdvng í Play chvngce click vl dvng wa ie .. wekvt nø dvgávdè ta shì meyøsongs ceri ta shìlun shì a:mì..;)
yazvng taq ø mvkun ce walam dvre ce ri ie
Na Ling A:mi အဖေသာစာနာရင် Kangpasvng shongshxnge
gvray jeju svguni ရေပေါ်ကအရိပ့် Gvray Jeju ShvGun I
DEPVNKARU DeeDang Song ကာရာနီလမ်း ၂
စောဝင်းလွင် အသက်စမ်း အစဉ်ကိုးစား DøngJa
RvZiMongce I think I love you Vdèòwángzàzvmì
RvwangDudecouple အားလုံးအတူပ SanPi Priasesong
Nàmongsvng မေမေချစ်တဲ့သားကြီး Nønt Dong NvrømKà
LSaiZi Rvwang Vnvpmece Marang Sengnaw Good Bye Unknown ရတနာဦး x'mass DS Ngang Song
Mènànáni ရတနာဦး x'mass song စံပီး X'mass
VNgá Song Tsawmyitsakse DSNgáng
Nanghpe ntsun sai Sumla Nanghpetsawraai
Nor Ni Song NàSvngwa Myit daik na
ChanYin manang zawn VNgang song
DS NGANG LsaiZi RWsong X'mass Song
Posted in: Flash Songs
8:34 PM Rvwang MvRing..! No comments
Rvwangceo shong nxnt nx kadvng tervnaq nx shongi we i ni gx Zidvng mvbong we rvt shelang shi bx...Nanvp we rvwang ce..
RW love songs mp3
1:40 AM Rvwang MvRing..! No comments
Rvwàng V̀ngJà YoshìShø̀ng ni rì
1. S.DeeDvng2.Z.HkuBu 3.S.DeeDvng 4.ChanYin
5. S.DeeDvng 6.S.DeeDvng vs TM.KoRvm 7.Z.HkurBu
8. S.DeeDvng 9.S.DeeDvng vs ChanYin 10.TM.KoRvm
11.Z.HkurBu 12.S.DeeDvng 13.ChanYin 14.S.DeeDvng
Rvwang zvmi vjxng
1:05 AM Rvwang MvRing..! No comments
Posted in: Flash Video
Screen ကို ပုံယူတ
12:17 AM Rvwang MvRing..! No comments
ကျတော်ကသူများလိုတော့စာေ၇းမရေးတတ်ဘူး ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်က ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Screen ကို ပုံယူတဲ့ software လေးပါ
VsvngRìò Lvpvt S DøDvngLun
8:24 AM Rvwang MvRing..! 1 comment
Myitkyina TiWin mvring AG hebron shxngxmré i wà o we 50 nøng shélóngtøng kvt Poí
Vnvm vchvngrì shvngbe sv̀ng vpøìe. Ya BloG cètaq Nàí kadøcè ràwe yv́ng shìe. ràwe yv́ngshì nìnø Shóng nønt kèní dèdá ngøt nà. Lv̀ngpvng yv́ng vru lám yv́ng paqzí èzǿngà wang paqzí røt shø̀nge...Oqa!!!
Copyright © 2011 RW mvrìng kèní vpǿng vto nge...! | Powered by Blogger